'Waxaan u noolahay inaan markale gabadheyda arko' - BBC News Somali
'Waxaan u noolahay inaan markale gabadheyda arko'
Lahaanshaha sawirka Addisalem Hadigu
Image caption Addisalem Hadigu gabdhiisan yar hadda waa asakariyad Eritrean ah
Wariye Itoobiyaan ah ayaa sheegay inuu rajeynayo 16 sano kaddib marki ugu horreysay inuu xaaskiisa oo Eritrea u dhalatay iyo labadiisa gabadhood uu la kulmo.
Arrintan ayaa waxay timid marki labada hoggaamiye ee dalalka ay kala saxiixdeen heshiis ay ku soo afjarayaan 'dagaalki xudduudda ee labada dal u dhaxeeyey' oo socday 999 ilaa iyo 2000.
Gaadiidka hawada iyo barriga ayaa la filayaa labada dal maalmaha foodda nagu soo haya iney dib u furaan, iyada isgaarsiinta taleefanka hal toddobaad ka hor la furay.
Addisalem oo wariyaha BBC ee qaybta afka Tigreega Hana Zeratsyon ay la kulantay ayaa wuxuu ka warramayaa colaadda labada dal dhex martay sida ay u burburisay qoyskiisa reerkiisana ay u kala qaybiisay.
Laba wiil oo walaalahay ah ayaan ku waayey dagaalka ay ku dhinteen tobannaanka kun ee dhex maray labada dal.
Wuxuuna dagaalku sababay qoysaska oo uu ka mid yahay qoyskeyga iney cadow iisu arkaan.
Xaaskeygu maadaamaa ay dalka eretrea u dhalatay waxay weyday xuquuqda iney xirfaddeeda macallinimo ay kaga shaqeyso Itoobiya. Waxaanna aad uga cabsi qabay in Eretrea lagu celiyo.
Hadda, waxaan ka caawiyey iney documenti sax ah ay ka hesho wasaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, dukumantiga oo caddeynayo iney guursatay nin Itoobiya u dhashay si aan ugu raadiyo fursad ay dalka ku sii joogto.
Image caption Dagaalga xadka labada ku dhexmaray tobannaan kun ayaa ku nafwaayey
Xaaskeyguna waxay codkeeda ka dhiibatay aftidi loo qaadayey madaxbannaanida Eretria 1993, xilligaasi oo ay shacabka Eretria ay u codeeyeen madaxbannaani laguna soo afjaray dagaal 30 sano socday oo ay madaxbannaani ku raadsanayeen.
Wey ka labalabeyneysay cod bixinta iney ka qayb qaadato balse aniga ayaa ku dhiirrageliyey iney codkeeda ka dhiibato.
Waxaanna u sheegay iney carruurteenna u sheegto taariikhda labadeenna- inuu aabbahood Itoobiyaan yahay oo uu ka soo jeedo deegaanka Tigreega, hooyadoodna ay u dhalatay Eretria.
Waxaan u keexay goobta cod bixinta si ay codkeeda u dhiibato. Xaaskeyga iyo 99% dadki Eretrianka ahaa waxay u codeeyeen iney ka go'aan Itoobiya.
Codka ay dhiibatay ayaa ah sababta ay shaqadeeda ku weysay-waxayna go'aansatay iney Itoobiya isaga tagto.
'waxaam dareemay inaan ahayn' sida qof dhintay oo kale'
Image caption Waddada isku xidha labada dal oo la filayo in maalmaha soo socda la furo
Waxaan mudda sugayey iney marun ii soo noqoneyso.
Waxaan ogaaday ine xadka ka gudubtay oo ay Eretria aadda, qoxooti ahaanna ay isku dhiibtay oo ay xerada ku nooshahay.
Eretria xudduuddeeda ayay ka xiratay dadka Itoobiyaanka ah. Xadka waan imid laakiin waan gubi waayey, xilliga qof dhintay oo kale ayaan iska soo qaaday.
'Dhambaalladi aan dirayey jawaab uma helin'
Reerkeyga waxay inbadan igu haysteen oo ay igu eedeynayeen inaan xaaskeyga xumeeyey oo ay xumaan igaga tagtay. Aniga oo og iney eeddaasi khalad tahay.
Aniga iyo xaaskeyga laba qof oo aad iisu jecel oo nolal farxad leh ku nool ayaan ahayn, waana isixtiraami jirnay.
Markay aniga iga tageysay dalka Eretria wax qaraaba ah kuma eysan lahayn.
Image caption Khariidad
"Runti wey iiga xanuun badneed dareenkeygu xilligaa qof marka uu kaa dhinto waxa aad dareemeysdi. waxay farriinta ay ii reebtay ahayd "aniga iyo carruurteydaba waxaan aadnay Eretria"
''Wiilkana adiga ayaan kaaga tagayaa. Haddii aan fursad helo dhambaallo ayaan kuu soo qori doonaa."
Xaafaddi aan dariska ahayn mudda toddobaad ah ayay i duljoogeen inta ay iga ba'eysay murugta igu dhacday.
Arrimahasi oo dhan markay dhaceen kaddib, noolasha aan soo maray sida ay ahayd idnkiigama sheekeyn karo. Erey ahaan kuma soo dhigi karee malaha sawir inaan muujiya ayaa fiicnaan lahayd.
Qof waalan, maqana jooga iyo qof dhintay balse socda oo kale ayaan ahaa, noolasha dhanba dhadhan iyo micnaba wey ila yeelan weyday.
Waxaanna jeclaa inaan dhinto. Maalin walba shaqada ayaan aadayaa markaan ka imaadana khamri ayaan cabayaa noolasheyda dhanba sidaa ayay noqotay.
Image caption Qabuuraha dadki ku dhintay dagaalka Eretria ay la gashay Ethiopia
Ilaa uu ra'isal wasaarahan cusub ee Ethiopia Abiy Axmed uu xilka qabto oo uu billaabo inuu dib u wanaajiyo xiriirka labada dal, wey adkeyd xataa inaan ku fakaro labada dal nabad iney dhaxmari karto.
Waxaan marar badan reerkeyga kula taliyey iney waddan kale aadaan si ay booqasho iigu suuragasho maadaamaa aan laga tallaabi karin xudduudda Eretria wey ku adkaatay iney dalka ka baxaan.
Farriimaha qoraalka waxaan u sii marinayey laanqeyrta cas maadaama ay qooysaska dagaallada ku kala lumay ay xiriiriso.
'Sanada badan oo caqli ka bax ah'
Gabdhahayda oo la kala yirahdo Asmera Addisalem iyo Danait Addisalem, ayaan seddex jeer farriimo qoraal ah u diray hal mar ayaanse jawaab ka helay.
Marki ay baraha bulshada caalamka ka billaawdeen, waxaan kala xiriirray dhanka Facebook laakiin xiriirkanaga ma ahayn mid joogta ah.
Gabdheyda yar Danait, ayaa marwalba i soo weydiisa sida aan ahay: "cod ahaan kuma wada hadlin laakiin waxay ii sheegtay iney ii xiistay"
Image caption Qurbajoogta ka soo jeedda Eretria iyo Itoobiya ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada dal
Waan ogahay gabadheyda yar waxay ka qalin jabisay dugsiga ciidamada lagu tababaro ee Sawa ayay ka qalinjabisay.
Hadda iyadu waa askariyad-marka waxay ka dhigan tahay iyada wadahadal badan nama dhaxmari karo.
Ciidamada gabadheyda la midka ah ee howl qaran ku jiro looma oggolo iney qaataan taleefannada gacanta (mobile).
Waxaan dareemay iney nafteeda halis ku jirto. Gabdhaheyga jaceylka aan u hayo ma aha mid la qiyaasi karo, weliba waxaan si gaar ah u sii jecelahay gabadheyda yar.
Waa gabar runti caqli badan oo da'deeda ka weyn. Beentana aad ayay u necebtahay.
20 sano kadib Itoobiya iyo Eretria oo soo afjaraya loollan uu dhiig badan ku daatay
Ra'isal wasaaraha Itoobiya oo booqanaya Eritrea
'Billowga noolasha cusub'
Si aad ah waxaan u rabaa inaan gabdhaheyga si degdeg ah ula kulmo oo aan uga sheekeeyo waxa aan niyadda ugu hayey oo jeceyl 16-ka sano.
Waxaan hadda ku gudajiraa baadi goobkooda, waxaan aad u rajeynayaa cinwaannadooda oo dhammeystiran inaan helo.
Anigu hadda 58 jir ayaan ahay. Mana aaminsaneen inaan intaan cimri ku soo gaaraya, balse waxaan u noolahay oo cimriga la iigu dheereeyey inaan gabdhahyga iyo xaaskeyga markale arko.
Hadda lafteeda, carruurteeyda habeen walba riyo ayaan ku arkaa, Axaddi markaan arkay Hooyooyin Eretriyan ah oo Mr Abiy Asmara ku soo dhaweynaya, gabdhaheyga iyo xaaskeyga hooyooyinka iyo carruurtaasi wajiyadooda ayaa iiga dhex muuqday.
Image caption Eritrian tira badan oo isugu soo baxay soo dhaweynta ra'isul wasaaraha Itoobiya
Waxaan rabaa inaa Asmara aado oo saaxibbadeey hore an la kulmo noolal cusubna halkaa aan ka billaabo.
Waxaan sida oo kale rabaa gabadheyda oo si wanaagsan ugu labbisan dreeska ciidamada inaan arko.Dhoolacaddeynteeda aan arko iyo farxadda wajigeeda marka aan kulanno aniga oo hadda duq ah.